Ilokhu asathuthuka presents kunendoda nangokwengeziwe olindele. Yingakho kukhona isidingo incazelo yokuthi yini imfundo Ngokuqhubeka, ngoba ezimweni wokuncintisana njalo ngenxa ngokuwina lowo ungafunda, relearn futhi sisebenzise lolu lwazi ukwenza.
Ngakho, lokho kuyinto eqhubekayo imfundo? Lokhu umqondo uvele emhlabeni esanda kutholakala, kuphela ngasekupheleni kwekhulu XX, kodwa ngokushesha wathatha enye yezindawo eziyinhloko e-Ohlwini lwezinkinga zemfundo, nezenhlalo inqwaba amazwe. Lo mkhuba lingachazwa ngokuthi inqubo yokukhula esiqhubekayo ukubaluleka kwabantu zemfundo kukho konke ukuphila. Lokhu kuhlanganisa erudition yakhe jikelele nokuthuthukiswa professional onguchwepheshe yesimanje, uchwepheshe emkhakheni wabo. Kusukela iphuzu yenhlangano Ngenxa ukusebenza Institute yokuqhubeka Education njengoba abaningi abanawo inikezwa sibonga ukusekela State ethintekayo kanye nomphakathi, lapho zazibandakanya ukusiza ukugcina operation esitebeleni of ezikhungweni zemfundo (lehlelekile nalengakahleleki, ngasese noma ngokuhlobene ezweni ubunikazi, eziyisisekelo sezihambile, eziyisisekelo futhi okufanayo, kanye eziningi nezinye).
Ukuze enze noma iyiphi imisebenzi iqondiswe imfundo okuqhubekayo?
Isinqumo yezinhloso yemfundo nokuqeqeshwa kanye imigomo kumele ihlangabezane 2 izindawo eyinhloko yomsebenzi. Ziyakwazi:
ezimali ngombono kanye nezidingo ukuphokophela kwezenhlalo, ukunikezwa yesimanje ulwazi umphakathi savvy ezindaweni zabo ubuchwepheshe nge abasebenzi professional, kwaqedwa isimo senhlalo yabantu kwamasiko futhi ezihlukahlukene;
nokwaneliseka umgomo umuntu Ukuzibophezela imfundo eqhubekayo kanye nentuthuko kukho konke ukuphila.
Ngakho, ngokuya Ngokuvamile, lokho okufunda impilo yabo yonke, sithole. Nokho, lokho ngempela yasisiza abstract hhayi amagama bawuqonda? Ake siphenye.
Qualitatively mkhuba omusha noma cha?
Naphezu kweqiniso lokuthi igama lo mkhuba laqanjwa muva nje, Ngokuqhubeka semfundo ngokwawo ajwayelekile kubo bonke: kokubili abadala nabasha. Iqiniso ukuthi unendawo lapho kunikezwe embili izixhumanisi iketango imfundo wabathengisa ubunye okunenjongo. Ngakho, ukwedlulela indoda zasenkulisa kuya esikoleni, bese - esikoleni, ekolishi, iyunivesithi noma Academy, nangemva - zifezeke futhi kukhona isibonelo imfundo okuqhubekayo, siqala eyayivela kakhulu. Lapha ukungena umuntu zibe nokuphila ezimele landulelwa kumiswa izingane nentsha, ngemva kwalokho kufika ukugcwaliseka umsebenzi kwezemfundo ngisho phakathi nokuphila omdala, lapho kunikezwa khona ulwazi ikakhulukazi okufakwe lapha nge umkhuba. Ukwahlukaniswa izinhlobo zemfundo Ngokuqhubeka Ungaphinde ukhethe i eyengeziwe, eziqu, nezinye professional efanele. Ngiyavuma ukuthi kulo mqondo, ukufunda okuqhubekayo futhi imfundo akuyona yini qualitatively entsha. Nokho, namuhla, lesi simanga avele izici ezithakazelisayo futhi eyingqayizivele, ezembula izici zayo ezithile.
Offset yobudala imikhawulo
ukuthuthukiswa engapheli wezwe "ngiyabonga" okungenani yokuthi sibonga kuye, asigcinanga nethuba ukwazi ukuthi imfundo okuqhubekayo, kodwa futhi ukuthi sibambe iqhaza kulo, kungakhathaliseki ukuthi iyiphi usuku lokuzalwa kufanele ibe iphasiphothi. Uma ekuqaleni ukuze uqale noma ukuqhubeka nezifundo zabo lapho usukhulile kwakubonakala okuthile omdala okuyihlazo noma okungalungile, aphethwe indoda, kodwa izibalo namuhla lembula amanye amaqiniso athakazelisayo: uhlobo yendabuko abafundi engaphansi kancane kancane liyancipha ku esidlule 25. Ngokwesibonelo, e-US ezingaphezu kuka 43% wabo bonke abafundi abadala kunazo lesi sibalo. 45% basafunda kancane kuphela, okungukuthi, awuwuboni njengoba isiphetho ngokwakho, kodwa sihlanganise yokufuna ulwazi nokuprakthiza. Ngaphezu kwalokho, idatha emayelana ngqo Russia, abonisa ukuthi kwezinye izindawo, 50% abaneziqu zaseyunivesithi futhi 64% abathweswe iziqu ezikhungweni sokufundela ukushintsha umsebenzi wabo ngokushesha ngemva kokuphothula alma yakhe Mater. Futhi imithombo emhlabeni ukubika ukuthi 4% kuphela abantu enamandla emsebenzini emhlabeni kule mkhakha baye bathola ekuqaleni. Lezi amaqiniso ukuthi akukwazi akakhulumanga okuhle noma okubi, kodwa inzuzo yabo sobala kuyinqobo kancane kancane abantu phezu ukwesaba ukuphinda uqeqesho kanye nokulahlekelwa isikhathi. Namuhla-ke ayisekho fa womuntu eziyigugu kakhulu. Inkulumo ethi "Uhlala - futhi ufunde" isiba zisabalele.
By the way, Ngokuqhubeka imfundo professional akukwazi kudidaniswe imfundo eqhubekayo. Lesi sakamuva igatsha kwemfundo noqeqesho, ngalesikhatsi kuchutjekwa imfundo libhekisela endaweni ebanzi - komphakathi. Uma ukuqeqeshwa igxile zokuxhumana nolwazi umfundi libhekene ehlala njalo khona abantu ngaphakathi kwezindonga ezikhungweni zemfundo ezahlukene, imfundo eqhubekayo - kuba qualitatively isigaba ezahlukene. Lihlanganisa ulwazi nje kuphela kodwa futhi amakhono, amakhono akhe, ukusebenza indima ethile nomphakathi inqubo kokuphila komphakathi nokusebenza, amakhono okukhiqiza kahle bahlele sikhatsi sabo, ukuxazulula izinkinga, ukuzivumelanisa kushintsha njalo izimo.
Ukwakhiwa eside evuselelekayo kuyinto ngezinga elithile eziphathelene nemfundo okuqhubekayo. Kuyinto efanayo ukuthola imfundo "ezingxenyeni" kukho konke ukuphila. Ngisho noma umuntu ihamba kude kokuhlala isikhathi eside esikoleni esifanayo, nokho ifunda ngosizo neminye imisebenzi, asebenzise amasu okunye nezindlela. okuqhubekayo professional uhlelo lwezemfundo, ngaleyo ndlela amboze yonke yokuphila komuntu, kusukela ekuzalweni kuze kube sekufeni, naphezu kweqiniso lokuthi abantu ungeyena abafundi njalo.
Umqondo ekushintsheni imfundo Russian
Namuhla e-Russia, njengakwamanye amazwe amaningi athuthukile futhi asathuthuka emhlabeni wonke abakhuthalele kwenziwa uhlelo ukuthuthukisa sikhungo yale mfundo. Kuhlanganisa 4 zithwala yomsebenzi:
ekuthuthukiseni izinga lemfundo ochwepheshe;
ukwedlulisela kumiswa esiqhubekayo ngumuntu ukuhweba;
ukuhlinzekwa kwezimali imfundo;
Kuhlelwa kabusha jikelele (zesibili) imfundo.
Yiqiniso, ezweni lazo lomdabu namuhla kunezindlela eziningi izinkinga kanye nobunzima. Ngokwesibonelo, e-Russia kukhona egunyaziwe izinhlelo hhayi ngabanye okufundiswa kanye nezinhlelo, kanye nezikhungo zemfundo ngokwabo, ngakho ukubaluleka ukuthola diploma isikhungo esithile namanje ubusa ngaphezu ukubaluleka amakhono adingekayo njengoba enjalo, ngenkathi they are ukuze kube lula muntu namuhla ngokuvamile asifundisa njengomuntu, isikhathi esifushane kodwa ulwazi igcwele izifundo noma trainings. It ngeke lisetshenziswe kuze kube sekupheleni futhi ibanga yokufunda, engesiyo efanelekayo abafundi lapho kuziwa, isibonelo, mayelana nokuqhubeka imfundo yezokwelapha. Phela, odokotela esizayo ngokuyinhloko ukuba nginakekele uthisha uqobo. Ngaphezu kwalokho, ngenxa umehluko ekhona phakathi ukuthuthukiswa nokomuntu siqu kwala mazwe womabili 'ayikwazi waqaphela ngokugcwele. Thatha okuqhubekayo imfundo zezibalo, okuyinto manje ethembisa kakhulu. Le ndoda enilambayo yolwazi, isazoqhubeka kungagcini indawo yabo yokuhlala - ukuqhubeka nezifundo zabo phesheya kuyodingeka izimali, ezithinta abameleli glubinok ngisho ne giftedness yabo bangase bamane nje kungabi.
Nokho, uma umuntu target akaqhubeki imfundo yezokwelapha noma ezinye, efana naye, exhunywe ngephrofayela ewumngcingo ke esimweni esinjalo ungathatha self-imfundo, ngisho ekhaya, futhi ukukhulisa abanye amakhono abo siqu. I kuqala ngaleso yesimanje futhi abantu abafundile namuhla:
ulwazi okungenani eyodwa olunye ulimi;
kahle kwikhompyutha siqu kanye nesethi eziyisisekelo izinhlelo standard;
ngomkhondo izindaba ezindaweni professional: ukuqapha kwi-Inthanethi, ukufunda kwezincwadi ezikhethekile, ukuzimisela ukuzijayeza waphinda "kusayithi elilandelayo";
izinsiza ulwazi, lapho ungakwazi 'bafunde ukufunda ", ie asuke efuna ulwazi oludingekayo;
ukuthuthukiswa umthwalo, isiyalo, indlela yokudala ukusebenza, isinyathelo ukuzethemba.
Into esemqoka - khumbula: akukephuzi kakhulu ukuba uqale!
Minsk State neziLimi University (eMoscow State neziLimi University) website esemthethweni, izikolo ezidlulayo kanye nokubuyekeza
Izibuyekezo mayelana abangane nge incazelo: izitatimende yasekuqaleni ukuxhumana nomphakathi
"Uqalekisiwe Izinsuku" Bunin: Isifinyezo by isahluko